Ukuba nithanda ukubukela ikhathuni kubonisa ke ubuya ngokuqinisekileyo uthanda Donald Duck kunye funny sengqondo kunye nelizwi. Duck Scruffy i ekwazi ezintlanu kwiindawo zokubeka umdlalo ngokusekelwe yentsapho amadada ikhathuni. Ungenza ukudlala lo best slots bonus site umdlalo kunye yayo 25 paylines fixed. Le kwesimo lo mdlalo noopopayi chibi iintyatyambo kwemitholo kunye isele kwi igqabi. Umculo uhlobo ikhathuni kwisiqalo igcina nawe njalo ababenalo. Kukho ezinye abalinganiswa funny ngokwenene njengemiqondiso umdlalo ukuba ongeze element mnandi ukuba reel. Umda ukubheja kulo mdlalo afakwe ubuncinane 25p kunye lingu- £ 250 basonta nganye.
Malunga umbhekisi phambili Duck Scruffy
Le style cartoon elimangalisayo ukuba udlale yakho best Slots site ibhonasi waphuhliswa NetEnt. Igama brand ethandwa kushishino longcakazo namakhulukhulu imidlalo wekhasino wadala kubasebenzisi online.
Kule ezisekelwe ikhathuni game slot funny, ungafumana iisimboli yentsapho amadada. Indoda business idada oyindoda, uyida- ngumama, uyida- intsha kwaye umzalwana wakhe omncinane, uyida- young. Ukudlala amakhadi ekonookrwece iqanda yaphulwe ke iisimboli asezantsi ixabiso le midlalo ukuba singadlala khona best Slots site ibhonasi. Le idada inkunzi byi phezulu nge 400 amaxesha ngomhla ezintlanu hlobo yayo phezu payline. Kukho weesimboli ezimbini bhonasi emdlalweni kwaye lukwa ledada elibi kunye nenye uphawu ibhonasi.
Bonus Wild: Uphawu Intshontsho ledada ke phawu lasendle lo mdlalo yaye ifikelela kuzo zonke abanye. Xa kubonakala idibanise lokuwina, Uphawu kumila idada ende kwaye ezintle ukugubungela yonke esondweni. Ngaloo ungalindela ezo kwi big kunye neesimboli zasendle ngaphezulu. Ngexesha osebenzisa free, zasendle ivela njenge ekwandiseni sasendle, zasendle rhoqo zasendle angathethekiyo kukugubungela reel ezintathu yonke.
siwachithe Feature: Kukho logo iFree osebenzisa ngaye kuyo kwaye isici usichithachithe. Ngoku uyazi ukuba wenza ntoni, kufuneka wazi ukuba wenza njani. Xa udlala le slot kwi yakho best Slots site ibhonasi, uya kuqaphela iisimboli agcwayele ezintathu uvule ezinye iimpawu bonus. Kusenokuba enikezela nayiphi na enye iinkalo ezintlanu liquka ijikelezisa simahla ukususela ezintandathu ukuya kwishumi elinesihlanu.
Xa ukudlala lo mdlalo kwi best Slots site ibhonasi, uya kufumana konwaba kunye kweWCED ezahlukeneyo bonus.